Vavaka amin'ny alina mahery manohitra ny herin'ny maizina | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka amin'ny alina mahery manohitra ny herin'ny maizina
25 Fa raha natory ny olona, ​​dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin'ny vary, dia lasa nandeha.
Ny fotoan'ny alina dia fialokalofana ho an'ny rehetra hery maizina. Raha ny tena izy dia ny antony niantsoana azy ireo herin'ny maizina dia satria mandeha ny maizina, raha matory ny lehilahy. Mba ho mpino efa mandresy dia tsy maintsy mianatra manararaotra ny ora alina ianao. Tsy maintsy mianatra ny fomba fivavaka amin'ny vavaka amin'ny alina ianao. Tsy ho vitanao ny handresy ny devoly amin'ny maha-kristiana tsotra anao matory tontolo andro sy alina. Ao amin'ny Lioka 18: 1, dia nilaza i Jesosy fa hivavaka mandritra ny fotoana rehetra, ao amin'ny Matio 26:41 Jesosy dia nilaza fa tokony hiambina sy hivavaka isika mba handresena ny fakam-panahy, ao amin'ny 1peter 5: 8-9, dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa ny diaben'ny demonia ny tenany dia toy ny liona mierona mitady izay hotadiavina, ary tsy maintsy manohitra azy mafy orina isika amin'ny finoana. Androany isika dia hanao vavaka mivavaka mahery manohitra fahefana. Ity vavaka amin'ny alina ity dia hanomana anao ara-panahy mba handresena ny herin'ny alina. Rehefa ampiarahanao amin'ny finoana izany, ny hetsika rehetra ataon'ny devoly amin'ny fiainanao izay ataonao amin'ny alina, dia ho ringana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Zanak'Andriamanitra, aza mandry ny andronao alina, sahirana be dia be ny alina rehefa ataon'ny hery maizina. Ity hery ity dia miady amin'ny zanak'Andriamani-tra ary manitsakitsaka azy ireo amin'ny faharesena tsy misy farany Saingy rehefa miakatra anio alina ianao ary manomboka manohitra an'io hery maizina io amin'ny alàlan'ny vavaka ataonao amin'ny alina, dia handresy amin'ny fomba feno ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka manova na inona na inona ny toe-javatra sy ny toe-javatra rehetra, ny vavaka amin'ny alina izay efa ataonao izao anio izao dia manana hery hanala izay rehetra nataon'ny devoly tamin'ny fiainanao sy ny fianakavianao. Rehefa manao vavaka amin'ireto alina ireto ianao dia ny fandringanana an'i satana rehetra apetraka amin'ny fiainanao dia haringana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa rehefa manao vavaka mandry alina aho Ny fotoana tsara indrindra hanombohana dia ny ora amin'ny misasak'alina 12 ka hatramin'ny 2 ora maraina. Ireo fotoana ireo dia mazàna antsoina hoe ora ratsy, satria ireo fotoana izay anaovana karazana habibiana an'i Satana. Ny asan'ny devoly dia maizina amin'ny alina, ka izany no antony tokony hanoahanao ireo amin'ny alina. Manontany tena ve ianao hoe maninona no tena atao amin'ny alina ny ankamaroan'ny asa ratsy? Ny anton'izany dia satria ny devoly mameno ny habakabaka amin'ny ratsy kokoa amin'ny alina fa tsy amin'ny andro. Ny fampitahorana amin'ny alina araka ny Salamo 91: 5 no tena izy. Ireo dia hery mahery vaika navoakan'ny devoly isan'alina mba hanafika Kristiana tsy misy fotaka sy tsy mivavaka. Fa ianao kosa doro amin'ny afo, tsy azo iharan'izany. Ny afon 'Andriamanitra tsy azo vonoina dia mihodidina ny kristiana mivavaka foana. Rehefa manao vavaka amin'ny fomba fiainanao anio ianao, indrindra ny vavaka amin'ny alina, hitako fa mafana loatra ny fiainanao amin'ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'ny anio, tsy ho fantatrao mihitsy ny faharesena amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamporisika anao aho hivavaka amin'ity vavaka ity amin'ny finoana ary handresy ireo alinao amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ny vavahady rehetra sy ny tohatra rehetra manoloana ny fanafihan'i satana teo amin'ny fiainako, esory mandrakizay amin'ny ran'ny
2. Nialako tamin'ny ozona, rajako, mantra, ody ary fanjakazakana ratsy, notarihiko tamiko tamin'ny nofy, tamin'ny anaran'i Jesosy.
3. Ry hery ratsy fanahy, afaho amin'ny afo aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ireo faharesen'i satana rehetra teo amin'ny nofy dia havadika ho fandresena, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny fitsapana rehetra amin'ny nofy, dia havadika ho fijoroana ho vavolombelona, ​​amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Ny fitsapana rehetra amin'ny nofy, dia hiova ho fandresena, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ny lesoka rehetra amin'ny nofy dia hiova ho fahombiazana, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ireo mavesatra rehetra amin'ny nofy, dia hiova ho kintana, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ny fanandevozana rehetra amin'ny nofy, dia hiova ho amin'ny fahalalahana, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ny fatiantoka rehetra amin'ny nofy dia hiova ho tombom-barotra, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ny fanoherana rehetra amin'ny nofy, dia hiova ho fandresena, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Ireo malemy rehetra amin'ny nofy dia hiova ho tanjaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ny toe-javatra ratsy rehetra amin'ny nofy dia hiova ho toe-javatra tsara, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Manafaka ny tenako amin'ny kilema rehetra nampidirina tamin'ny fiainako tamin'ny alàlan'ny nofy aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
15. Ny ezaka rehetra ataon'ny fahavalo hamitaka ahy amin'ny nofy, dia tsy mahomby amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Izaho dia mandà ny vady ara-panahy ratsy, vady, zanaka, fanambadiana, fifanarahana, varotra, fanenjehana, firavaka, vola, sakaiza, havana, sns, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Ry Jesoa Tompo, sasao ny masoko, ny sofiko ary ny vavako amin'ny ranao.
18 Andriamanitra, Izay mamaly amin'ny afo; Valio amin'ny afo rehefa tonga amiko ny mpanafika ara-panahy.
19. Ry Jesosy Tompo ô, manolo ny nofy satanana rehetra amin'ny fahitana avy any an-danitra sy ny nofy avy amin'Andriamanitra.
20. Tompo mahatalanjona, mamerina ny faharesena rehetra izay efa niaretako tamin'ny nofy, tamin'ny anaran'i Jesosy.
21. Izay nofinofiko nanonofy izay tsara ary avy amin'Andriamanitra dia voaraiko; ary ireo izay satana, dia mandà azy ireo aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Isaky ny alina sy ny fanafihana amin'ny nofy ary ny vokany dia nofoanana amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Mitaky fahalalahana amin'ny nofy satana sy tsy milamina aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Mitaky fahalalahana aho amin'ny fampidirana ny tebiteby sy eritreritra mahamenatra ho an'ny nofiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Mijoro amin'ireo nofinofy faharesena sy ny fiantraikany aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ny teti-dratsin'i satana rehetra hamelezana ahy amin'ny nofy sy fahitana, sorena amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Ny fitaomana demony rehetra, mikendry ny handrava ny fahitako, ny nofiko sy ny fanompoana, dia samy diso fanantenana tanteraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Ny tanana mpamosavy rehetra, mamboly voa ratsy amin'ny fiainako amin'ny alàlan'ny famelezana nofy, malazo ary may ho lavenona, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Amin'ny ra nalatsak'i Jesosy, mananatra ny nofy rehetra mampatahotra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Tompo ô, avelao ny fahitana ratsy sy ny nofinofiko momba ny fiainako hiserana any an-tobin'ny fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy.
31. Ny ozona rehetra eo amin'ny fiainako amin'ny alàlan'ny nofy dia hohamaivanin'ny ran'i Jesosy.
32. Ny ozona rehetra amin'ny nofinofisin'ny misavoritaka sy tsy mikorontana amin'ny fiainako dia hohamaivanin'ny ran'i Jesosy.
33. Ny ozona rehetra manelingelina ny fiainako amin'ny alàlan'ny nofy amin'ny endrika mahazatra, dia hohamaivanin'ny ran'i Jesosy.
34 Nandefa ireo basy voatifitry ny basy aho tao anatin'ny nofy, tamin'ny anaran'i Jesosy.
35 Izaho dia mandreraka ny mpiasan'ny alina ary mandrara ny sakafony amin'ny nofiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Izay rehetra manenjika amin'ny nofiko, manomboka mikatsaka ny tenanareo, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Ny voaloto rehetra amin'ny fiainako amin'ny alàlan'ny nofy dia diovina amin'ny ran'i Jesosy.
38. Izaho dia manafoana ny nofinofy mihemotra, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Ny nofinofy rehetra momba ny fanakorontanana mankany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany dia ho rava. Handeha avy any amin'ny voninahitra mankany amin'ny voninahitra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Amin'ny herin'ny ran'i Jesosy, dia esoriko ny datin'ny fahamatorana amin'ny nofinofy ratsy rehetra teo amin'ny fiainako.
41. Ry Andriamanitra mampiroborobo, amporisiho ahy mihoatra noho ireo nofinofisiko indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Ny aretina rehetra, nambolena tao amin'ny nofy teo amin'ny fiainako, mivoaha ankehitriny ary mandehana any amin'izay naniraka anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Tompo ô, avelao ny fiainana hiala amin'ny nofiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
44. Amin'ny herin'ny ra nalatsak'i Jesosy, velona daholo ireo nofinofiko sy fahitana tsara nalevina.
45. Amin'ny herin'ny ra nalatsak'i Jesosy, ny nofinofiko sy fahitana tsara rehetra voaloto, dia mahazo vahaolana avy amin'Andriamanitra.
46. ​​Amin'ny herin'ny ran'i Jesosy, aoka ny mpamono rehetra sy ny vina mpamono izay miasa amin'ny fanoherana ny nofinofiko sy ny fahitako tsara.
47. Amin'ny herin'ny ran'i Jesosy, avereno amin'ny afo vaovao ny fahitana tsara rehetra nangalariny.
48. Amin'ny alàlan'ny herin'i Jesosy, ny nofinofy sy fahitana tsara rehetra nafindra dia averina amin'ny afo vaovao.
49. Amin'ny herin'ny ra nalatsak'i Jesosy, dia aoka tsy hisy olona tsy miandany daholo ny nofy sy fahitana tsara rehetra izay nanapoizina.
50. Amin'ny herin'i Jesosy, avelao ny fahitana tsara nofinofy rehetra izay hahazo hery.
51. Ny voaloto rehetra amin'ny fiainako, amin'ny alàlan'ny nofy, diovina amin'ny ran'i Jesosy.
52. Izay zana-tsipìka manohitra fandrosoana, izay nitifitra teo amin'ny fiainako tamin'ny alàlan'ny nofinofy tsy misy dikany amin'ny anaran'i Jesosy.
53. Toheriko ny fandrahonana ho faty amin'ny nofiko amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy
54. Ny nofinofy ratsy rehetra nataon'ny olon-kafa momba ahy, fa foanana eo amin'ny tontolon'ny astral, amin'ny anaran'i Jesosy.
55. Ny sary rehetra nataon'i satana tamin'ny nofiko, dia manozona anao aho, mitadiava afo ankehitriny ny anaran'i Jesosy.
56. Ny nofinofy fanakorontanana, ny fihemorana, amin'ny anaran'i Jesosy.
57. Ny zana-tsipìka rehetra amin'ny fahafatesana amin'ny nofy, mivoaha, ary miverena any amin'izay mandefa anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
58. Ny nofinofy manohana ny fahantrana amin'ny fiainako amin'ny faharatsiana ao an-tokantrano, tsy misy ary amin'ny anaran'i Jesosy.
59. Nataoko tamin'ny tany daholo ny nofinofy fahantrana, amin'ny anaran'i Jesosy
60. Hanafoana ny fanodikodinana ny nofinofy satana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
61. Ry herin'ny alina, mandoto ny nofinofiko alina, dia ho mararin'ny anaran'i Jesosy.
62. Ny nofinofy manohitra ny fanambinana, maty, amin'ny anaran'i Jesosy mahery.
63. Soraty amin'ny anaran'i Jesosy ny teti-dratsy fanenjehana rehetra ataon'ny satana amiko.
64. Izaho dia manome endrika ny fanahy izay mitondra nofy ratsy amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
65. Nofoanana sy nofafako daholo ny nofy ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
66. Ny ràn'i Jesosy, hamafa ny nofinofy ratsy rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
67. Ny nofinofiko, ny fifaliako ary ireo zava-bitako izay nilevina tao amin'ny tontolo maizina, dia velona ary mizaha ahy izao, amin'ny anaran'i Jesosy.
68. Ny bibilava nofy rehetra, miverena amin'ny mpandefa anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
69. Ny hery rehetra, mamboly fahoriana amin'ny fiainako ao amin'ny nofy, alevina velona, ​​amin'ny anaran'i Jesosy.
70. Na inona na inona fandaharana ratsy, nametraka teo amin'ny fiainako avy tamin'ny nofinofiko, dia ho ravana ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
71. Isaky ny soratan'ny ody, manome tsinontsinona ny fivavahako sy ny fiainam-bavaka, dia mahazo ny fanafihana ny kotroka masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
72. Ny fifehezan'i satana rehetra tsy hita maso, misy fiantraikany amin'ny vavako sy ny fiainako hivavaka, dia lanin'ny afo masina masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
73. Ny fanandevozana fototra ratsy, mampifandray ny fiainako amin'ny fandringanana anatiny sy ivelany, dia levona amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
74. Ry fanandevozana fototra ao amin'ny fianakaviana, miantraika sy manaratsy ny fiainako, mamarana sy manapotika ny asanao aho amin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy.
75. Izay fitaovana madiodio tsy hita maso sy hita miharihary eo amin'ny tontolo iainako sy ny tranoko, manintona ny famonoana demonia, roana, amin'ny anaran'i Jesosy.
76. Ianao alàlan'ny fivavahako, raiso ny afo sy herin'ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
77. Isaky ny vavaka vavaka manokana maty, mandray ny fikasihan'ny afo ary ho velona indray, amin'ny anaran'i Jesosy.
78. Ny fikorontanana ara-batana sy ara-panahy rehetra, mandray anjara amin'ny tsy fivavahako, dia ho faty tampoka amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
79. Ny làlan'ny ody ratsy rehetra amin'ny fiainako, nolavin'ny ran'i Jesosy, tamin'ny anaran'i Jesosy.
80. Ny zana-tsipìka fihinanana ratsy rehetra, nopotserina nankamin'ny fiainako, dia mivoaha ary miverena amin'ny afo amin'ny mpandefa anao amin'ny anaran'i Jesosy.
81. Izay taova rehetra amin'ny vatako, eo ambanin'ny fitaoman-dratsy, dia halefa amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
82. Ry Tompo, avelao hirehitra afo ny zana-tsipìka avy any an-danitra ary havoaka hamelezana ny tobin'ny mpikarakara alina, amin'ny anaran'i Jesosy.
83. Ianao no vavako, hamafisiko anao amin'ny ran'i Jesosy, mandà ny mofomamy satana, amin'ny anaran'i Jesosy.
84. Ny fitaka ratsy rehetra izay ampiasaina hamahanana ahy amin'ny nofiko, dia holevoniko amin'ny afo ianao, amin'ny anaran'i Jesosy.
85. Ny fiaraha-miasa rehetra amin'ny mpikarakara sakafo amin'ny alina, mikendry ny aiko ho amin'ny ratsy, miparitaka amin'ny kotroka, amin'ny anaran'i Jesosy.
86. Tompo ô, avelao hikatona ny lalan'i Jesosy ny lalan'ny fanahy mazoto ary ny fiasa amin'ny alàlan'i Jesosy.
87. Na iza na iza amin'ny fiainako, ny tranoko sy ny tontolo manodidina ahy, manintona ny asan'ny mpikarakara sakafo mandritra ny alina, dia ho levon'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
88. Ny antony mafy loha rehetra tsy mahomby amin'ny fiainako dia naleviko sy holevoniko amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
89. Izay mpikambana ao amin'ny fianakaviako, manome hery ny fahavalo ivelany hamely ahy, matin'ny kotroka, amin'ny anaran'i Jesosy.
90. Ny fitaovam-piadiana rehetra anaovan'ny mpampandeha kitapom-bola, manapoaka ny aiko andro aman'alina, mivadika amin'ny tomponao, amin'ny anaran'i Jesosy.
91. Isaky ny seza rehetra amin'ny ody amin'ny fianakaviako / hanambady / tokantrano, mitono afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, misaotra anao noho ny fandreseko tamin'ny Anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaky ny alina amin'ny fanoherana ny fanahy hafahafa Fizarana 2
Next lahatsoratra45 Ny fivavaha mba hisian'ny fandrosoana eo amin'ny fiainana
Chris March 16, 2021 Ao amin'ny 7: 23 am
Nifindra tao amin'ny trano ratsy feno demonia rehefa zazakely, reny sy raim-pianakaviana / raikely nilalao tamin'ny ouija board ary nametraka fanontaniana momba ahy. Ny olon-tiako taloha dia nampiasaina hanohitra ahy tamin'ny voloko, nodorana tao an-dohako avy eo nitifitra ary namely ny foko toy ny maivana. Mbola ao an-tratrako, may, mihetsika, maty ny heriko ary mora azon'izy ireo hanafika ahy. Mila fanampiana aho, fanahy inona io? inona ny vavaka ilaina?
zazakely 12 aprily 2021 Amin'ny 5:36 maraina
Vavaka fanafahana ho fiarovana ny zanatsika
30 Maneho vavaka amin'ny fanoherana ireo mpanendaka sy mpanamory
Vavaka enti-milaza ny fanahin'ny hatezerana sy lolompo